Amniga Caasimadda oo qalqal ku jira | KEYDMEDIA ONLINE
Amniga Caasimadda oo qalqal ku jira
Amniga Caasimadda ayaa qatar ku jira, waxaana maalmahaan laga dareemaya Magaalada Muqdisho cabsi dagaal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka walwalsan in ay dagaallo ka dhacaan magaalada, maadaama magaaladda laga dareemayo saan saan dagaal.
Dadka Muqdisho ayaa hadal haya in Madaxweyne Farmaajo oo kusii adkeysto joogista Villa Somalia, wixii ka dambeeya 8-da Febraayo ay keeni karto in lagu dagallamo Caasimadda.
Waxaa jirta xaalad cabsi ah, oo ku aadan in dalka fowdo iyo qalalaase ka dhacaan, hadii la qaban waayo doorasho waqtigeeda ku dhacdo, oo xor iyo xalaal ah, iyadoo laga digay in marnaasho dhanka awoodda ah.
Baraha laga ilaaliyo Madaxtooyadda Soomaaliya ee Villa Somalia ayaa waxaa lagu rakibay Qoryo culus, waxaana aad loo xiijiyay Amniga waddada soo galeyso Madaxtooyadda.
"Kolley Kursiga wuu macaan yahay, Farmaajo waxaan ka baqeynaa inuu dagaal na geliyo" mid ka mid ah waxgaradka Muqdisho oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sidaasi yiri.
Hub uruursiga ka socda Muqdisho, abaabulka ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo ciidanka dowladda ee Muqdisho lagu soo daabulayo ayaa cabsi wey kusii beeray dadka shacabka ah.
Baaritaan badan kadib, Warbixin ay Keydmedia Online soo qortay horaantii bisha December ayee ku ogaatay in Caasimadda dalka ee Muqdisho, si xooggan uga socda hub uruursi aad u badan, kadib casbi laga qabo in dalka uu galo qalalaase siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka.
Baaritaankaan ay sameysay KON ayaa lagu ogaaday in uu qiimaha hubka la iibin jiray Suuqyada madow ee magaalada Muqdisho uu kor u kacay, kadib markii ay soo bateen dadka hubka iibsanaya, sida ay inuu sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada hubka oo magacyadooda qariyey, sababo amni.
Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa sheegay in aysan u ogolaan doonin Farmaajo in saacad dheeraad ah ku darsado waqtigiisa, islamarkaana ay awood uga tuuri doonaan Kursiga.
Muqdisho xaalkeeda ma sahlana, shacabka qaar ayaa bilaabay raadinta meelihii ay gambaadka ka dhigan lahaayeen.